Amehlo aphuzi ezingwenya, impumelelo yokuhlela ka-2006 | Izincwadi Zamanje
Amehlo aphuzi ezingwenya (2006) yinoveli okuhamba phambili kusuka kumbhali waseFrance, intatheli kanye nothisha uKatherine Pancol. Ngokulandelayo, le ncwadi iyisitolimende sokuqala se-trilogy engaziwa eqhutshwa I-waltz ehamba kancane yezimfudu (2008) futhi Izingwejeje zaseCentral Park zibuhlungu ngoMsombuluko (2010).
Ngaphezu kwalokho, impumelelo enkulu yokuhlela ye- Les Yeux Jaunes des Izingwenya —Igama lokuqala lesiFulentshi— lenze iPancol yaziwa umhlaba wonke. Empeleni, lesi sihloko sithole, phakathi kokunye, iMaison de la Presse Award. Ngokufanayo, indaba yakhe yalethwa esikrinini esikhulu e-2014 ngaphansi kokuqondiswa kukaCécile Talerman; Kudlala u-Emmanuelle Béart noJulie Depardieu.
1 Ukufingqwa Kwamehlo Aphuzi Ezingwenya, nguKatherine Pancol
1.2 Izinhlamvu zesibili
1.3 Iphuzu le-inflection
2.3 Umqondo womsebenzi
2.3.2 I-protagonist esuselwa kumlingiswa wangempela
2.4 Ukuzalwa kwe-trilogy
3 Mayelana nomlobi, uKatherine Pancol
3.1 Impilo yonke exhunyaniswe nezincwadi nobuntatheli
3.2 Izincwadi zikaKatherine Pancol
Isifinyezo se- Amehlo aphuzi ezingwenyanguKatherine Pancol
UJosephine ungowesifazane oneminyaka engama-40 ubudala ohlala eParis nomyeni wakhe u-Antoine namadodakazi abo amabili, uHortense noZoe. Ekuqaleni, Yize ukwehluleka okusobala komshado wakhe, akakwazi ukuthatha isinqumo esiwujuqu ngenxa yokungazethembi kwakhe. Kunoma ikuphi, ukwahlukana akunakugwenywa, ngoba umyeni wakhe ubukeka enosizi ngemuva kokuxoshwa endaweni yokugcina izikhali lapho abesebenza khona.
Ukuthola okuningi, U-Antoine ubelokhu ekulesi simo unyaka futhi, esikhundleni sokuzinyakazisa, uqala ukungathembeki kumkakhe. Bese kulandela ingxoxo yokugcina ngokuhlukana okunengqondo. Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke, kwenziwa uchungechunge lwemicimbi ethile ye-surreal nexhumanisiwe. Omunye wawo ngumsebenzi u-Antoine awuthatha e-Afrika njengomphathi wepulazi lezingwenya.
Eminye imicimbi engajwayelekile ifaka abalingiswa besibili. Okokuqala: uShirley oyindida, umakhelwane oyingqayizivele; nowesibili: Umama kaJosephine obandayo uHenriette. Lesi sakamuva sashada nesikhulu uMarcel Gorsz emshadweni wesibili, okwamvumela ukuba abe nempilo yobukhazikhazi ayehlala eyifuna.
Inkambo yemicimbi ithatha ushintsho olukhulu lapho u-Iris, Udadewabo kaJosephine omuhle, Uthi ubhale inoveli, yize kunjalo, kungamanga. Ngaphezu kwalokho, uncamela ukugcina inkohliso kuze kube sekupheleni, kuze kube yilapho ecela udadewabo ukuthi abhale lo mbhalo. Yize uJosephine angawuthandi lo mbono, ekugcineni uyavuma ukwenabisa lo mbhalo ukuze athole imali eningi (nokukhokha izikweletu zakhe).
Abanye ezinyangeni kamuva le ncwadi ibonakala ishicilelwe, okuqukethwe kwayo kusekelwe kokukhulu ulwazi lomlando nguJosephine cishe ngekhulu le-XNUMX. Ukwethulwa kwaba impumelelo yokuhlela; U-Iris uthola lonke udumo; UJosephine, umholo. Kodwa-ke, abangani besazi-mlando basola ukuthi ungumbhali wangempela wencwadi futhi lokhu kugcina kuthinta ubudlelwano phakathi kodade.
Amehlo Aphuzi E ...
Isakhiwo siqukethe izimo ezizungeze impilo yansuku zonke yamadoda nabesifazane abajwayelekile edolobheni elikhulu elifana neParis. Lapho, amalungu esifazane endaba abonisa (ngamunye ngendlela yabo) izifiso zabo ezingagcwaliseki maphakathi nendaba egcwele amanga. Kepha akuyona yonke into izinyembezi nokudumala, kukhona nendawo yothando, ukuhleka namaphupho.
Les Yeux Jaunes des Izingwenya Yincwadi elayishwe ngezimpawu eziningi. Ukuze uqalise, amehlo aphuzi ezihuquzelayo amelela izinhlobo ezahlukahlukene zokwesaba: ukufa, impilo, ukuba ngokwakho, ukulahleka, ukuthembeka ... Bonke abalingiswa besatshiswa okuthile.
Ngokufanayo, iPancol iqhathanisa izimfanelo zabalingiswa bayo ngokukhathazeka. Ngokwesibonelo: UHenriette Gorsz akesabi lutho, kuphela ukungabi nemali eyanele. Ngakho-ke, uyayidelela indodakazi yakhe encane, uJosephine, ozwelayo futhi ophanayo. Esikhundleni salokho, indodakazi yakhe endala, u-Iris, udlulisela kuHenriette (isithombe) sayo yonke into ayithandayo: amandla namandla.
UKatherine Pancol uchaze kabanzi ukuthi kanjani wahlanganisa indaba yakhe ngesikhathi senhlolokhono eyanikezwa ngo-2015 uSophie Mason wengosi yase-Australia Izimpaphe ze-firebird. Ngemuva kwalokho, umbhali waseFrance wabhekisa emshweni ka-Isak Dinesen ofundeka kanje: “uqala ngombono, uhlobo oluthile lokudlalela umdlalo phambili… Bese kufika abalingisi, bathathe indawo bese benza indaba”.
Amehlo aphuzi ezingwenya kufakazela izinhlobonhlobo zamatimu nezitayela uKatherine Pancol azifundile kusukela esemncane. Yebo, ezinkulumweni ezahlukahlukene athi uzithokozele ukufunda izinganekwane zezinganekwane zaseGibhithe, isiArabhu nezaseScandinavia. Ngokufanayo, umbhali waseFrance ukhulume Abazalwane bakaKaramazov (UDostoevsky), Le Perere Goriot (Balzac), ngisho noDavid Copperfield.
I-protagonist esuselwa kumlingiswa wangempela
UPancol uchazele uMason ukuthi umlingisi wakhe omkhulu usekelwe kumuntu wangempela. “Mina naye saxoxa, wayenokubukeka kwesidala okuthile, ebukekayo kancane futhi lapho ngilalele, ngawuzwa lowo muzwa ojwayelekile! UJosephine wayesezelwe ”. Ngalawo mazwi, umbhali waseFrance wachaza umcwaningi ahlangana naye ogwini lwaseNormandy.
Futhi, UPancol ubalule ukuthi umcwaningi we-CNRS (Isikhungo Sikazwelonke Socwaningo Lwezesayensi - isichazamazwi sesiFulentshi bekugxilwe esifundweni esisodwa iminyaka engama-30: Abathengisi bamaphephandaba okuvakasha ngekhulu le-XNUMX eFrance. Kusukela lapho, umbhali wadala umhlaba ozungeze uJosephine, okuthi, ngokungafani nomlingiswa wangempela, ahlaziye abalingiswa bekhulu le-XNUMX.
Ekuqaleni, umbhali weGallic wayengacabangi ngokwakha i-trilogy. Noma kunjalo, Ekupheleni kwencwadi yokuqala, uPancol uqhubeke nokucabanga ngabalingiswa ... "Kwenzekeni ngezimpilo zabo? Ingabe wawudabukile noma ujabulile? Ngale ndlela, izitolimende ezimbili ezilandelanayo zavela lapho kuvezwa khona izinhlobonhlobo zabanye abalingiswa.
Mayelana nomlobi, uKatherine Pancol
Wazalwa ngo-Okthoba 22, 1954, eCasablanca, eMorocco; ngaleso sikhathi leli dolobha laliseyingxenye yomvikeli waseFrance. Lapho eneminyaka emihlanu, uKatherine omncane wathuthela eParis nomndeni wakhe. Kamuva, Ngesikhathi esemusha, waqeqeshelwa ukuba uthisha waseFrance nowesiLatin.
Impilo yonke exhunyaniswe nezincwadi nobuntatheli
Maphakathi nawo-70s, UPancol waphothula iziqu zakhe zobudokotela kwi-Modern Letters e-University of Nanterre futhi waqala umsebenzi wakhe wobuntatheli. Ngemuva kokushicilela inoveli yakhe yokuqala, Moi d'abord (Mina kuqala, 1979), wathuthela eNew York. Lapho, wabhalisa e-Columbia University ukuze athathe izifundo zokubhala bese eqhubeka nokusebenza kuleyunivesithi.
Kusukela ngo-1981, umbhali waseFrance waqala ukusebenza njengomhleli we- novelas nanjengomlobi wephephabhuku komagazini Elle y Paris Match. Kwimithombo yezindaba eshiwo ngenhla, wazakhela udumo ngenxa yesitayela sezingxoxo zakhe. Ngenkathi ekwi-Big Apple, uKatherine Pancol washada waba nezingane ezimbili (owesifazane nowesilisa). Njengamanje uhlukanisile futhi uhlala eParis.
Izincwadi zikaKatherine Pancol
U-Eugene & kimi (2020) yincwadi yamashumi amabili nambili esayinwe nguPancol, onomsebenzi wokubhala ohlanganisa amashumi amane eminyaka. Kungumsebenzi owaqala ngonyaka we-2006 ngenxa yokwethulwa kwe- Amehlo aphuzi ezingwenya. Akumangalisi ukuthi lo mbhalo uhunyushelwe ezilimini ezicishe zibe yishumi nambili; phakathi kwalabo: amaShayina, amaKorea, amaNtaliyane, amaPolish, amaRussia, ama-Ukraine kanye namaVietnam.
Ngaphandle kwalabo okukhulunyiwe Moi d'abord, Les Yeux Jaunes des Izingwenya y U-Eugène & Moi, Uhla lwezincwadi lwePancol luqedwa ngezihloko ezilandelayo:
Owemzini (IBarbare, 1981)
Ngicela ubomvu (Scarlett, yebo kungenzeka, 1985)
Amadoda anonya awahambi ezitaladini (Les hommes cruel ne circulant pas les rues, 1990)
Kusuka ngaphandle (I-Vu de l'extérieur, Seoul, 1993)
Isithombe esihle kangaka: UJackie Kennedy (1929-1994) (Manje, isithombe siphinda sikhishwe, 1994)
Umdanso owodwa (Encore unedanse, 1998)
Et monter ngokucacile dans un amense omkhulu ... (2001)
Indoda ekude (Un homme à ibanga, 2002)
Ngibambe: impilo isifiso (Embrassez-moi, 2003)
I-waltz ehamba kancane yezimfudu (ILa Valse Lente des Tortues, 2008)
Izingwejeje zaseCentral Park zibuhlungu ngoMsombuluko (Les écureuils de Central Park ziyadabukisa, 2010)
Amantombazane [Isiqephu 1: Dansa emini] (2014)
Amantombazane 2 [Isiqephu 2: Isinyathelo esisodwa nje kude nenjabulo] (2014).
Amantombazane 3 [Isiqephu 1: Woza ngekhanda empilweni] (2014)
Amanga amathathu (Ama-Trois baisers, 2017)
Umbhede Wombhede (2019)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Amehlo aphuzi ezingwenya